Grossmünster, Grossmünster - Zurich
Eoropa Soisa Zurich
Adiresy: Grossmünsterplatz, 8001 Zürich, Soisa
Tranonkala Ofisialy: grossmuenster.ch
Fotoana fiasana: isan'andro isaky ny 10:00 hatramin'ny 18:00
Raha te hitsidika ireo mpitsidika ara-pivavahana ao Soisa ianao , dia ny voalohany indrindra, any Zurich dia mendrika ny hahita ny Katedraly Grossmünster (Grossmünster). Na izany na tsy izany, ity monastera majestic ity dia efa nekena ho toy ny karatra fitsangatsanganana ao an-tanàna, ary noho izany dia miorina eo afovoany.
Raha mikasika ny resaka tantara, te-hanamarika aho fa ny katedraly dia naorina tamin'ny taonjato faha-9 tamin'ny didin'i Charlemagne. Marina fa na dia nanomboka tamin'ny taona 1090 aza ilay fanorenana, dia tamin'ny taonjato faha-18 ihany no nahavitana izany, ka noho izany ny trano fanorenana tempoly dia natao tamin'ny fomba samihafa (Romanesque, Gothic, neo-gothic). Teny an-dalana, akaikin'ny Grossmünster dia nisy sekolim-piangonana, izay lasa sekoly voalohany ho an'ny zazavavy tamin'ny taona 1853. Ho an'ny androany ao amin'ny fanorenany dia hita ao ny teolojia teolojia.
Inona no tokony ho hita ao amin'ny Katedraly Grossmünster?
Voalohany indrindra, aoka ho azo antoka fa hitsidika ny fampisehoana ny organ ary hankasitraka ny hatsaran-tarehin'ny tranobe. Etsy ankilany, ny zava-mitranga dia atao amin'ny alarobia amin'ny 18:30, ny fandaniana amin'ny fidirana fidirana dia 15 francs.
Ny zavatra mahavariana ny mpandeha any Zurich dia sarisary izay azonao ankafizina raha miakatra ny tilikambon'ny katedralina. Marina fa misy ny lozam-pifamoivoizana kely: mila mandresy ny tohivakin'ny tilikambo ianao, alohan'ny hahalalanao ny fomba fijerin'ny tanàna taloha sy ny hakanton'ny Lake Zurich . Tsy dia ilaina loatra ny manamarika fa, raha tianao, dia azonao atao ny mandidy ny fitsidihana ny tilikambo, izay aloan'ny tsirairay. Fa ny fiakaran'ny vidiny dia 4 francs (tapakilan'ny olon-dehibe) ary 2 francs (ankizy sy mpianatra).
Ao amin'ny andohalan'ny fasan'ny Grossmünster dia afaka mahita ny sarivongan'i Charles be voninahitra, kopia iray tamin'ny taonjato faha-15, izay nafindra tany amin'ny tranon'ny tempoly. Ary teo amin'ny iray tamin'ireo rindrin'ny tempoly, ny anaran'i Henry Bullinger, ilay mpiandry lehiben'ny fiangonana, dia tsy maty.
Alohan'ny hidirana ao amin'ny katedralina, tandremo tsara ny mijery ny vavahadin-tserasera, ary ny ambony dia ny lasalan'i Sigmar Polke sy ny varavarankely vita amin'ny varahina izay anisan'ny asan'i Otto Munke. Sarobidy ihany koa ny firavaka sy ny tsanganana ao amin'ny vavahadin-tserasera.
Mandeha ao amin'ny tempoly ianao, mampitsahatra ny masonao eo amin'ny varavarankely vita amin'ny jiro noforonin'ilay mpanakanto malaza Aleman Biennale Sigmar Polka. Ireo asa fitaratra dimy amin'ny ampahany atsinanan'ilay trano dia maneho sary hosodoko avy amin'ny Testamenta Taloha. Ary ireo varavarankely fitaratra vinaingitra fito dia misy agatha.
Mankanesa any amin'ny katedralina, alao ny tram misy ny 3, 4, 6, 11 na 15 ary mialà eo amin'ny toeran'ny "Zürich" na "Helmhaus". Etsy ankilany, any amin'ny faritry ny reniranon'i Limmat dia tempoly hafa malaza any Zurich - Fraumunster .
Fanamarihana momba an'i Urania
Katedralin'i St. Peter (Riga)
Fonon'ny valindrihana - ahoana no fomba hanamboarana angona?
Ahoana ny fisafidianana plonono ho an'ny fitomboana?
Niresaka momba ny faniriana an'i Rosia i Helen Mirren
Ahoana no ahafahana maniry thuju avy amin'ny voa?
Ahoana ny fomba fanaovana ny tanana trellis?
Nahoana ny saka no tia boaty?
Mbola mila mpandidy indray i Blake Live
Soup miaraka amin'ny dumplings
Curtains-kofehy ao an-dakozia
"Dnok" torolàlana ampiasaina
Mofomamy mofomamy miaraka amin'ny famonoana ranom-bary - recipe
Birao misy sora-baventy
Ahoana ny hanomezana saka britanika?
Ahoana no hamantarana ny taonan'ny sokatra sokajy?
Croton - fampielezana amin'ny famongorana
Saron-tsoavaly volafotsy vita amin'ny vato
Topiary vita amin'ny volon'ondry
Enterobiosis amin'ny ankizy